ဒီအချက်(၄)ချက်သိရုံနဲ့ သူသင့်အပေါ်ဖောက်ပြန်နေပြီလားဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပြီ ! | Buzzy
ဒီအချက်(၄)ချက်သိရုံနဲ့ သူသင့်အပေါ်ဖောက်ပြန်နေပြီလားဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပြီ !
ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ရင် တွေ့ရများဆုံးလက္ခဏာတွေကို Lipstick Investigations ရဲ့မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဒေးဗစ် ကင်းက ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူက ဖောက်ပြန်ခံရဖူးတဲ့ မိန်းမတွေဆီ ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီး အားလုံးထဲမှ တူညီနေတဲ့အချက်တွေကို ဆွဲထုတ်ကောက်နုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် သင်အနေနဲ့သတိထားလို့ရအောင်၊အခြားလူတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှလို့ရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့်ယောက်ျား (သို့) ချစ်သူဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပြင်ဆင်နေပြီဆိုရင် ဥပမာ- ဆံပင်ဒီဇိုင်းအသစ်ပြောင်းတာ၊အကျီ င်္စတိုင်လ်အသစ်ပြောင်းတာ၊ ရေမွှေးတွေပိုစွတ်လာတာမျိုးပေါ့။ သူဟာ သင်နဲ့အတူကုန်ဆုံးအချိန်တွေကို ရှောင်ယ်လာရင် သင့်အပေါ် ဖောက်ပြန်ချင်နေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။
သူ့ရဲ့ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျုတာမှာ သင်မသိအောင် ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်နံပါတ်တွေတောင်းထားခြင်း။ သူ့ရဲ့ဖုန်းအဝင်ကောလ်တွေ၊ မက်ဆေ့ခ်ျတွေဟာ ထူးခြားမှုမရှိဘဲ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထားတာကတော့ သူ့ရဲ့private space ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖောက်ပြန်သူတွေရဲ့နောက်ထပ် အကျင့်လက္ခဏာတစ်ခုက စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမြည်လာရင် ချက်ချင်းကောက်ထပြီး အခြားနေရာမှာစကားသွားပြောနေတာမျိုးတို့။ သင်မေးသမျှ မေးခွန်းတိုင်းကို (ရိုးရိုးမေးခွန်းလေးဖြစ်သည့်တိုင်) ဖြေရမှာ မွှန်းကြပ်နေပြီ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်ပြခြင်းတို့ဟာ အဓိက လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မဖြစ်မနေမို့ ပြန်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာလည်း သူအပြင်မှာ လေကောင်းလေသန့်ရှုချင်လို့ဆိုပြီး ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ သင်မပါဘဲ အခြားနေရာတွေကို သွားချင်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သင့်ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ပါလား... မုန့်သွားစားပါလားလို့ အကြံပေးတာတွေကလည်း တစ်ဖက်မှာ သူလမ်းထွက်ချင်လို့ အကြောင်းရှာနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ဟာ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။